Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBiljana
Indlu ikumgama oziikhilomitha ezi-6 ukusuka kumbindi wesixeko. Indawo iphangalele kwaye izolile kakhulu. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinekhitshi eliqhotyoshelweyo kunye negumbi lokuhlambela. Amagumbi okulala kunye nendlu yangasese zikumgangatho wokuqala kwaye indawo yokungena isuka ngaphandle kwendlu ngoko ke ukuba ufuna ukuya kwigumbi kufuneka uphume endlwini kwaye ungene kwelinye icala lendlu.
Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elinekhitshi eliqhotyoshelweyo kunye negumbi lokuhlambela. Amagumbi okulala kunye nendlu yangasese zikumgangatho wokuqala kwaye indawo yokungena isuka ngaphandle kwendlu ngoko ke ukuba ufuna ukuya kwigumbi kufuneka uphume endlwini kwaye ungene kwelinye icala lendlu.
Le ndlu inekhitshi elincinci elihle elinayo yonke into oyifunayo ngexesha elifutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Biljana
Ekubeni ndihlala kunxweme lwelizwe andiyi kuhlala ndifumaneka ukudibana neendwendwe kodwa kuya kuhlala kukho umntu oza kukunika isitshixo, okanye siya kwenza isicwangciso esicacileyo sokufumana isitshixo. Akuyi kuba nzima ukuyifumana :)